Tatitry ny Mpisera: Fanjakana ao Kenya sy Meksika, Manahy Fanodinkodinana Twitter Ny Olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2017 15:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, русский, Nederlands, Español, English
Ho setrin'ilay fitokonana faobe nanerana ny firenena nataon'ireo Keniàna mpitsabo, izay nanohitra ny tsy fanajàn'ny governemanta ny fifanarahana iombonana mifehy azy ireo, dia nisy ny fihenjanana nipoitra tety anaty haino aman-jery sosialy. Ny antsasak'ireo toeram-pitsaboana an'ny fanjakana sisa no niasa ary nahatonga ny olona tsy hanana fitokiana tamin'ny governemantan'i Uhuru, indrindra fa taorian'ireo filazana fisianà vola dolara an-tapitrisa nanjavona taomin'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Na nahazo tohana tsy azo notsinontsinoavina avy amin'ny vahoaka aza ny fitakian'ireo mpitsabo, nisy ihany koa tao amin'ny haino aman-jery sosialy ireo hafatra fanaratsiana ireo mpitsabo. Nisy tamin'ireo bilaogera no nahita fifandraisana henjana teo amin'ireo kaonty Twitter mpanaparitaka ireo tenifototra toy ny #GreedyDoctors, #MyBadDoctorExperience, sy #DaktariRudiKazi [ry Mpitsabo, ndeha miverina miasa] sy ireo izay nanindrahindra ireo hafatra hafa mpomba ny fanjakàna. Mino ireo manampahaizana manokana momba ny haino aman-jery sosialy fa tsy olona tsotra no nandefa ireny hafatra ireny, fa ireo “mahay mitaona” nokaramain'ny governemanta. Misy ny mandefa tsilian-tsofina hoe mety misy ifandraisany irenykaonty ireny sy ilay vondrona iray ahitàna bilaogera 36 tena mpitaona olona, izay lazaina fa nokaramain'ny Sampana Fifandraisana Stratejikan'ny filoham-panjakana mba mba hiady hanova ireo fitantaràna manakiana ny governemanta ety anaty aterineto.
Tsy irery i Kenya amin'io tranga io. Izany mihitsy, miaraka amin'ireo firenena toa an'i Shina sy Venezoela, izay mijoro hatry ny ela hiaro ny tombontsoam-panjakana amin'ny alàlan'ireo mpaneho hevitra amin'ny haino aman-jery sosialy, ireo fampielezankevitra fombàna ny governemanta nataony vao haingana tety anaty aterineto, toa niditra nanatevina laharana ireny firenena ireny i Meksika, miaraka aminà fampielezankevitra mpomba ny governemanta ety anaty aterineto.
Tamin'ny Janoary ny akaiky indrindra, ny fisondrotan'ny vidin'ny entona fandrehitra dia niteraka hetsi-panoherana nataon'ny vahoaka tany amin'ireo arabe migodàna sy tety anaty aterineto, nisy kaonty Twitter azo nisaina tamin'ny rantsan-tànana nanomboka nankalaza hetsika tsy ara-dalàna toy ny fandrobàna sy halatra, izay hita ho ezaka iray handònana ireo adihevitra ary hamiliana ireo hetsika ho any amin'ny tsy ara-dalàna. Ny tena niraisany, nasisik'izy ireo ny tenifototra #SaqueaUnWalmart (“Robao ny Walmart iray”) ho any anatin'ireo adihevitra misy ny tenifototra #gasolinazo, izay betsaka tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana no nampiasa azy. Nisy ihany koa ireo kaonty nanaparitaka sarin'olona manao korontana, izay hita avy eo fa sandoka (ireo sary, raha ny marina, dia sary avy amin'ireo korontana an-dalambe tao Ejipta tamin'ny 2011.)
Amin'ny alàlan'ny fijerena angon-drakitra azo avy amin'ireo bitsika 15.000 mahery mifandray amin'ìreo hetsi-panoherana dia hitan'ireo mpahay momba ny siansan'ny angon-drakitra ao amin'ny Anjerimanontolo Zezoitan'i Guadalajara fa ny tenifototra #SaqueaUnWalmart no nanapaka ireo korian'ny fifanakalozanadresaka, niaraka tamin'ny fikatsahany hampifandray ny #Gasolinazo aminà fikasòna ratsy. Ny sasany tamin'ireo kaonty tafitditra tamin'ireny fampielezankevitra ireny dia fantatra fa boto na ‘trolls’ izay efa nisy nifandraisany tamin'ireo filàna vaniny sy fanaovana sotasota ary fandrahonana natao an'ireo mpanao gazety sy mpikatroka sosialy.
Ireny fandinihana ireny, ankoatra ireo filazana tsy ela akory izay hoe misy rindrambaiko mpitsikilo nampiasaina hamely ireo mpikaroka sy mpiasam-bahoaka nankalaza ny resaka hetra amin'ny ‘soda’ (tatitra nataon'ny New York Times ary nohalalinin'ny Citizen Lab), ary manosoka hevitra momba ny fisianà tontolo mampihorohoro bebe kokoa ho an'ny olompirenena mikatsaka ny hisolo vava sy haneho ny fomba fjerin'izy ireo momba ireo olan'ny tombontsoam-bahoaka ao Meksika.
Ny 15 Febroary, voabahana tao Venezoela ny fantsona CNN amin'ny teny espaniola sy izay rehetra tranonkala mifandray amin'ny an'ilay tambajotrambaovao manana ny foibeny any Etazonia, taorian'ny nitaterany momba ireo pasipaoro hosoka.
Tsy irery ny CNN — ny TV Azteca ao Meksika ihany koa dia nesorina tsy ho hita ny 16 Febroary. Hatramin'ny 7 Febroary, ny tranonkala Maduradas, tranonkalambaovao Venezoaliana sy fanehoana ny hevi-bahoaka, dia tsy afaka nidirana tamin'ny ankamaroan'ireo mpanome tolotra aterineto (isan'izany ny CANTV izay eo ambany fanarahamason'ny fanjakàna) tany amin'ireo faritany fito ao Venezoelà. Fantatra amin'ny fanaovany famintinana ireo valinkafatra ety anaty aterineto momba ny olan'ny fiainan'ny vahoaka ilay tranonkala. Tao anaty fanambaràna iray ho an'ny daholobe, nantsoin'ny filoha Venezoeliàna, Nicolas Maduro, hoe “fitaovana fampiasa amin'ny ady” ny CNN.
Tratry ny ala saron'ireo mpikaroka avy amin'ny Amnesty International ireo andianà fanjonoana mifangidongidotra, fanafihana nikendrena hitsikilovana ny asan'ireo mpanao gazety, sendikan'ny mpiasa sy ireo mpiasa mpikatroka miaro ny zon'ireo mpifindramonina ao Qatar, izay avy any Nepal ny betsaka indrindra amin'izy ireo. Toa mpisehatra avy amin'ny fanjakana no nandrindra ny raharaha, na dia tsy misy aza ny porofo, hatreto, hanaovana tsoakevitra momba izay ao ambadik'ireny fanafihana ireny. Ireny fanafihana ireny dia nanasa ireo lasibatra mba hanokatra rohy mankany amin'izay heverina ho antontan-kevitra ao amin'ny Google Drive na Google Hangouts, nefa raha ny marina dia mitondra mankany aminà rindrambaiko mpitsikilo.
Nampitandrina ireo fikambanana media ao Thailand hoe misy volavolan-dalàna mety hitondra hankany amin'ny fanomezana fahefana feno ny governemanta hifehy ny asa fanaovana gazety. Ilay nomena anarana mahaliana hoe “Fiarovana ny Zo sy Fahalalahan'ny Media, ireo Fenitra Matianina sy ny Fitsipi-pitondrantena” dia hitakiana amin'ireo mpanao gazety mba hanana fahazoandàlana hanao ny asany. Hamorona ihany koa ny atao hoe Filankevitra Nasionalin'ny Asa Fanaovana Gazety izy io, izay mety ho ireo solontenam-panjakàna avy amin'ireo ministera no hitantana azy voalohany. Araka an'i Chakkrit Permpool, filoha fahiny tao amin'ny Filankevitra Nasionalin'ny Gazety tao Thailand, “Eo ambany fitondrana jadona irery ihany ny zavatra toy io no misy. Mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana vaovao io…izay miantoka ny fahalalahan'ny haino aman-jery sy ny fahalalahan'ny vahoaka maneho hevitra.” Maherin'ny 30 ireo fikambanana haino aman-jery nanao sonia fanambaràna niraisana nandàvana ilay tolo-dalàna.
Nanambara drafitra iray hiadiana amin'ny fiparitahan'ireo vaovao sandoka ny Facebook mialoha ny fifidianana ataon-dry zareo Frantsay ny Aprily sy ny May, tamin'ny alàlan'ny fanombohana fiarahana miasa aminà fikambanana haino mana-jery valo izay hanao fanamarinana sy hanivana ireo lahatsoratra milaza vaovao asian'ireo mpampiasa marika ao amin'ny Facebook. Saingy ny sasany kosa manahy hoe tsy haharitra ilay fiankinan'ny Facebook amin'ireo trano mpamoaka vaovao izay efa voafetra rahateo ny fahafahany ara-pitaovana.
Ny 23 Febroary, hiatrika fitokonambe antsoina hoe Fitsinjarana Fandavàna ny Vehivavy, ireo orinasa sy fikambanana mikirakira ny teknolojia mba hanehoan'izy ireo ny fanomezan'ny indostrian'ny teknolojia lanja ireo vehivavy sy ireo nitsipaka ny nahariana azy (transgenres). Ho fanohanana ity hetsika ity, ny fanentanan'ny Fikambanana ho Fivoaran'ny Fifandraisana ’ Raiso ho anao ny Teknolojia’ dia manangona ireo tantara momba ny fanavakavahana sy ny resaka lahy sy vavy any anatin'ny indostrian'ny teknolojia sy ny vondrom-piarahamonina any. Fantaro bebe kokoa eto.
Adin-Tenirohy: Mametraka an-tSarintany ny Resaka an-tSerasera Miompana amin'ny Fiakaran'ny Vidin'ny Etona Tao Meksika – Signa Lab, Jesuit University of Guadalajara
Samy nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Marianne Diaz, Leila Nachawati Rego, Njeri Wangari sy Sarah Myers West